Ukubuka okuphambi kweLake kusuka kundlwana yethu e-Honey Harbor
Georgian Bay, Ontario, i-Canada
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Heather
Uyemukelwa endlini yethu encane eseHoney Harbour, evuselelwe kabusha. Ikhishi lomqondo ovulekile omangalisayo negumbi lokuhlala elinamafasitela ezithombe abonisa umbono weGeorgian Bay. Nethezeka futhi wehlise umoya kudekhi yokugoqa futhi ngenkathi ikotishi lethu lingaphansi kwamahora angu-2 ukusuka e-Toronto, kuzwakala sengathi awusekho ukuphila kwakho konke. Ziningi izinto ezenziwayo ezitholakalayo, ukubhukuda usuka esikhumulweni semikhumbi, ukudoba, ukugibela izigwedlo, i-kayaking kanye nokuhamba ngezikebhe. Jabulela umlilo wekamu ebusuku (njengoba kuvunyelwe). Indawo ekhetheke ngempela kubo bonke.
Lonke leli kotishi lenzelwe wena kuphela ukuze uhlale uphephile futhi unempilo ngesikhathi se-Covid-19 kuyilapho ujabulele uhambo olukhethekile ngempela. Kukhona ikhishi elikhulu lomqondo ovulekile nendawo yegumbi lokuhlala kanye namakamelo okulala ama-4 ahlukene.
I-Honey Harbour inesitolo segrosa, i-LCBO/Beer Store, izitolo zezipho, izindawo zokudlela futhi ivuliwe futhi ilandela imihlahlandlela yase-Ontario ye-COVID-19. Kunezifundo zegalofu ezimbalwa eduze, iMidland nePenetanguishene ziqhele ngehora elingu-1/2 futhi zilandela imihlahlandlela yase-Ontario.
Uma unemibuzo ngitholakala nge-imeyili noma ngomakhalekhukhwini
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$799.
Hlola ezinye izinketho ezise- Georgian Bay namaphethelo